Thwebula 4shared Desktop 3.49 – Android – Vessoft
AndroidInthanethiUkwabelana ngefayela4shared Desktop
Ikhasi elisemthethweni: 4shared Desktop
4shared – a software ukufinyelela nokwengamela idatha of service ifayela-ukwabelana 4shared. Isofthiwe ikuvumela ukufinyelela ulwazi akhawunti yakho, enze search ifayela advanced by mkhakha, download amafayela wamasayizi ahlukahlukeneko, ukuhlela idatha yomuntu siqu njll 4shared kwenza ukudlala kwabezindaba amafayela wenkonzo kudivayisi and wabelane i-akhawunti kanye abanye abasebenzisi. Isofthiwe iqukethe amathuluzi ukulungisa ukuvumelanisa of the gallery ne-akhawunti enikeza thwebula ngokuzenzekelayo izithombe kusuka idivayisi kusitoreji ifu.
Downloads amafayela letingemasayizi lahlukene
Data ukuphathwa akhawunti
Udlala media amafayela service
Ukwabelana of amafayela nabanye abasebenzisi
Thwebula 4shared Desktop
Amazwana ku 4shared Desktop
4shared Desktop software ehlobene
Ithuluzi esikahle for ukwabelana ifayela okusheshayo nge-Wi-Fi. Isofthiwe isekela ukudluliswa kwedatha kwikhompyutha noma amadivaysi eziningi kanyekanye.
imo – isicelo sokuthumela imiyalezo nokukhulumisana ngezwi. Futhi, kunethuba lokuxoxa nabangane abavela ezinsizakalweni ezahlukahlukene namanethiwekhi omphakathi.
I-Microsoft – imenenja esebenza ngokuningiliziwe ukulanda amafayela ezinhlobo ezahlukahlukene nokusakazwa kokuqukethwe ku-inthanethi, okuza ngesiphequluli esakhelwe ngaphakathi nokusebenza okuthuthukile.
IHay Day – umdlalo odumile wokuphathwa kwepulazi nokuthuthukiswa kwezolimo. Isoftware ikuvumela ukuthi utshale izilimo ezahlukahlukene, wakhe izindlu futhi ube nezilwane ezifuywayo.
Izinyoni Ezithukuthele – umdlalo we-arcade ngezindaba ezijabulisayo nemiphumela yomsindo ehlekisayo. Emidlalweni, kunamazinga amaningi ngobunzima obandayo nezinhlamvu ezihlukile ezinamakhono akhethekile.
I-Amazon – uhlelo lokusebenza olunesethi yokuhlukahluka nezimpahla ezivela kusevisi ethandwayo ye-Amazon. Isoftware inika amandla ukulandwa kwamahhala kwezicelo eziningi nemidlalo.